Midowga Africa oo wakiil cusub usoo magacabaaya Soomaaliya – XAMAR POST
Guddoomiyaha Midowga Afrika Musa Faki Maxamed ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u soo magacaabayo wakiilka Midoqwga Afrika ee arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
MR Musa ayaa soo dhaweeyay go’aanka golaha shacabka ku laaleen go’aankoodii 12kii April,waxaa kale oo uu soo dhaweeyay go’aanka uu Madaxweynaha Soomaalida Amniga doorashada iyo hanaanka doorashadaba ugu wareejiyay Ra’isalwasaaraha SOomaaliya Maxameed Xuseen Rooble.
Golaha amaanka iyo Nabadda Midowga Afrika ayaa dhawaan kulan ay ku yeesheen Magaaalada Adis ababa ku go’aamiyay in ay magacaabaan Ergey ka socda Midowga Afrika oo ka shaqeeya Siyaasadda Soomaaliya iyo doorashada.
Warbaahinta Afrika ayaa hadal heysa qoifka uu noqon doono Ergeygaas iyada oo loo badinayo John Mahama Madaxweynihii hore ee Waddanka Ghana oo ka mid ah Waddamada ay Ciidamada ka joogaan Soomaaliya.
Inkasta oo uusan Muusa Faki wali shaacin ergeygaas sheegayna in uu dhaqsi u soo magacaabayo ayaa lagu wadaa in marka la soo magacaabo uu horay ka guda galo shaqadiisa cusub ee la xiriirta siyaasadda iyo doorashada Soomaaliya oo uu is mariwaa ka taaganyahay.
Ra’isalwasaaraha Soomaaliya ayaa xalay shaaciyay in uu shir isuguyeerayo Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Dolwadda Federaalka iyada oo maamullada qaar ay ka gows adeygayaan ka qeybgalka shirkaas.
Maamulka Jubaland ayaa si cad u sheegay in uusan shirkaas ka qeybgaleyn ilaa awoodda amniga dalka looga wareejiyo Ra’isalwasaaraha Madaxweynaha faraha kala baxo doorashada dalka.